SAROM-BAVA VITA AMIN’NY LAMBA 300 isa isan’andro ny kaomandy azon’ireo mpivarotra
Nihazakazahana sy nifanotofana ny toeram-pivarotam-panafody sy ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro ny faran’ny herinandro teo. Toraka izany koa ny sarom-bava izay efa tafakatra 15.000 Ar ny.
Betsaka ireo tsy nahatakatra io fiakaram-bidy io noho izany ka nitady hevitra. Efa nanita-tsaina sy nanodina vola ho amin’izany ihany koa ireo mpivarotra zaitra tsena eny Andravoahangy ka nanjaitra sarom-bava vita amin’ny lamba. 1500 Ar monja ny iray tamin’izany ka nihazakazahan’ny rehetra. 300 isa isan’andro nanomboka ny Sabotsy teo ny kaomandy azon’ny mpivarotra iray, ka tsy nanao afa-tsy io asa io izy ireo ho fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Na izany aza dia ireo olona manana fari-piainana antonony ny ankamaroan’ireo hita teny an-toerana raha tsy reraka ny nilahatra teny amin’ireo toerana mahazatra kosa ireo mpanam-bola. Anisan’ny tanjona amin’ny fanaovana sarom-bava moa ny hahafahana miaro ilay otrik’aretina tsy hiditra any amin’ny orona na ny vava, indrindra amin’ny toerana be olona